ဒရုန်းအသုံးပြုပြီး ပစ္စည်းပို့ ဝန်ဆောင်မှု တရုတ်အွန်လိုင်း ကုမ္ပဏီ စတင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ဒရုန်းအသုံးပြုပြီး ပစ္စည်းပို့ ဝန်ဆောင်မှု တရုတ်အွန်လိုင်း ကုမ္ပဏီ စတင်
ဒရုန်းအသုံးပြုပြီး ပစ္စည်းပို့ ဝန်ဆောင်မှု တရုတ်အွန်လိုင်း ကုမ္ပဏီ စတင်
တရုတ် JD.com ကုမ္ပဏီက စက်ရုပ် ဒရုန်းတွေ အသုံးပြုပြီး ပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်လိုက်ပြီး အနာဂတ်မှာ စာပို့စက်ရုပ်တွေအဖြစ်လည်း အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒရုန်းရဲ့ ၂၅ မိုင် ပတ်လည်ကနေ မှာယူသူတွေကို ပစ္စည်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းချ ဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်တဲ့ အလီဘာဘာ၊ JD.com နဲ့ S.F. Express တို့ကလည်း ဒရုန်းအသုံးပြု ပို့ဆောင်မယ့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ စလုပ်နေပါပြီ။ ကုမ္ပဏီတွေက ဒရုန်းကို အသုံးပြုပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေအထိ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ နိုဝင်လဘာ ၁၁ ရက်နေ့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ် အွန်လိုင်းဝယ်ယူတွေအတွက် ဈေးချပေးတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီး ပါဆယ်ထုတ်ပေါင်း ၁ ဒသမ ၅ သန်းကို မှာယူသူတွေဆီအရောက် ပို့ပေးနိုင်ဖို့ ဒရုန်းတွေကို စတင်အသုံးပြု စမ်းသပ်သွားမှာပါ။ ဒရုန်းတွေကို လိုင်စင်လုပ်ခိုင်းပြီး အစိုးရဘက်ကလည်း ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။
ဒရုနျးအသုံးပွုပွီး ပစ်စညျးပို့ ဝနျဆောငျမှု တရုတျအှနျလိုငျး ကုမ်ပဏီ စတငျ
တရုတျ JD.com ကုမ်ပဏီက စကျရုပျ ဒရုနျးတှေ အသုံးပွုပွီး ပစ်စညျးပို့ဆောငျတဲ့ ဝနျဆောငျမှုကို စတငျလိုကျပွီး အနာဂတျမှာ စာပို့စကျရုပျတှအေဖွဈလညျး အသုံးပွုမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒရုနျးရဲ့ ၂၅ မိုငျ ပတျလညျကနေ မှာယူသူတှကေို ပစ်စညျးပေးပို့နိုငျပါတယျ။ အှနျလိုငျးကနေ ဈေးရောငျးခြ ဝနျဆောငျမှုတှလေုပျတဲ့ အလီဘာဘာ၊ JD.com နဲ့ S.F. Express တို့ကလညျး ဒရုနျးအသုံးပွု ပို့ဆောငျမယျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှေ စလုပျနပေါပွီ။ ကုမ်ပဏီတှကေ ဒရုနျးကို အသုံးပွုပွီး လမျးပနျးဆကျသှယျရေး ခကျခဲတဲ့ဒသေတှအေထိ ပို့ဆောငျပေးနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။
ဒီကနေ့ နိုဝငျလဘာ ၁၁ ရကျနဟေ့ာ တရုတျနိုငျငံမှာ နှဈစဉျ အှနျလိုငျးဝယျယူတှအေတှကျ ဈေးခပြေးတဲ့ နတေ့ဈနဖွေ့ဈပွီး ပါဆယျထုတျပေါငျး ၁ ဒသမ ၅ သနျးကို မှာယူသူတှဆေီအရောကျ ပို့ပေးနိုငျဖို့ ဒရုနျးတှကေို စတငျအသုံးပွု စမျးသပျသှားမှာပါ။ ဒရုနျးတှကေို လိုငျစငျလုပျခိုငျးပွီး အစိုးရဘကျကလညျး ထိနျးခြုပျထားပါတယျ။
Previous article2017 NOVEMBER 10 FRIDAY BUSINESS TODAY
Next articleပြည်မြို့ န၀ဒေးတံတားပေါ်က ကျောင်းသားတစ်ဦး ခုန်ချမှု ဖြစ်ပွား (ရုပ်/သံ)